साताको ब्लगर: अनन्त कोईराला - MeroReport
साताको ब्लगर: अनन्त कोईराला
ओखलढुङ्गाको दुर्गम गाउँमा जन्म भइ बिराटनगरमा हुर्केबढेका अनन्त कोईराला हाल ललितपुरको कुपन्डोलमा बस्छन् । केही समय पत्रकारितामा आबद्द भएका अनन्त हाल मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा अनुसन्धानकर्ता र जगदम्बा प्रकाशननमा सम्पादकको रुपमा पनि काम गर्छन । उनले मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजबाट पत्रकारितामा स्नातक र रत्न राज्य क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
आफ्नो अफिसको काम बाहेक उनी वैकल्पिक चलचित्रको प्रवर्धनमा पनि संलग्न छन । चलचित्र भनेको काल्पनिक कथामा मात्र सिमित नभएर समाजको यथार्थमा आधारित हुनु पर्छ भन्ने धारणा उनी राख्छन ।
ब्लगिङलाई सजिलोसँग स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्न एउटा राम्रो माध्यम मान्ने अनन्त आफ्नो कथा भन्न यसको प्रयोग गर्छन । सत्य - तथ्यको साथै रमाइलो तरिकाले ब्लग पोस्ट गर्ने अनन्त कोईरालासँग साताको ब्लगरको रुपमा केहि रमाइलो कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ मुना चापागाइँ र अजिता सिग्देलले गरेको कुराकानी :
तपाईंको दिनचर्या कसरी बित्छ ?
दिउँसो अफिस जाने र बेलुका फिल्मको काम गर्छु । अहिले हाइवे फिल्मको पब्लिसिटी र प्रमोसन हेरिरहेको छु । हामीले मुलधारको फिल्म भन्दा अलि फरक र यथार्थपरक चलचित्रको प्रमोसन चाही पहिलादेखि नै गरिरहेको हो ।
न्यू नेपाली सिनेमा भन्ने ग्रुप पनि चलाउँछौँ फेसबुकमा । त्यसलाई वेवसाइटको रुपमा बिकास गर्न खोज्दै छौँ ।
वैकल्पिक चलचित्र नै किन त ?
वैकल्पिक चलचित्रको फरक धारणा के हो भने चलचित्र भनेको कुनै तिलस्मी हिरो वा हिरोइनको कथा भन्दा पनि यसमा समाजको सत्य कथा हुनु पर्छ भन्ने हो ।
मुलधारको चलचित्रमा एउटा काल्पनिक हिरो, हिरोइन हुन्छ । हिरोले दश जना गुन्डालाई पिटेर लडाउँछ जुन यथार्थमा हुँदैन । त्यसैले चलचित्र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ भनेर हामीले काम गर्दै आएका छौँ ।
अब ब्लगिङ कै कुरा गरौँ । ब्लगिङ कसरी गर्न थाल्नुभयो ?
स्नातक पढ्न थाल्दा पत्रकारिता पढाउने सरले ब्लगिङ गर्न आदेश दिनु भयो । कलेजको नोटहरु नै ब्लगमा राख्यौ भने एकले अर्कोको नोट र पढ्ने सामग्री पाउँछौ भन्नु भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै मैले ब्लगिङ गर्न सुरु गरेको हुँ।
ब्लगको नाम के राख्नु भएको छ ?
Far inacorner that reflects reality and fun भनेर राखेको छु । मैले धेरै सोचेर यो नाम राखेको हुँ । मैले भित्रि रुपमा सोचेको कुरा जुन सत्य हुन्छ र रमाइलो तरिकाले लेख्छु भनेर मैले यो नाम राखेँ ।
के तपाईंले भनेजस्तो नाम अनुसारको ब्लग पोस्टहरु छन् त ब्लगमा?
छन् । मेरो ब्लगमा तीन प्रकारको पोस्टहरु छन : पहिलो पत्रकारिताको इतिहास, दोस्रो मैले भोगेको कथाहरु र अर्को सत्य तथ्यको साथ-साथै अलि रमाइलो ब्लग पोस्ट ।
मैले ब्लगलाई अलि फरक बनाउन खोजेको छु । मलाई गम्भिर खालको ब्लग मन नपर्ने भएकोले रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छु । यसबाहेक मिडिया अभ्यासको टिप्पणी पनि छन् मेरो ब्लगमा ।
कतिको भिजिटर छन ?
मैले २०१०बाट सुरु गरेको हो यो ब्लग । भिजिटर पहिले त कम थियो । तर अहिले बढेको छ । अहिले पाँच हजार भन्दा माथि छ । दिनहुँ पनि ५० भिजिट त भइरहेकै हुन्छ । ब्लग पोस्ट गरेको बेला तीन सय भन्दा माथि भिजिट भइरहेको हुन्छ ।
प्रतिकृया कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
मेरो ब्लगमा प्रतिकृया एकदमै कम छ । अनि अरुको ब्लगमा पनि हेर्ने गर्छु कमेन्ट कतिको आँउछ भनेर। सायद हामीकहाँ कमेन्ट दिने बानी नै छैन जस्तो लाग्छ । ब्लग पढ्ने, शेयर गर्ने लाईक गर्ने तर प्रतिकृया चाहिँ नलेख्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।
मेरो कथा भन्न । ब्लगमा आफ्नो कुरा स्वन्त्रताले लेख्न पाइन्छ । मैले लेखेको कुरालाई मुलधारको मिडियाले ठाउँ नदिन सक्छ । अनि सोसियल मिडियामा एक लाईनमा आफ्नो कथा भन्न पनि सकिदैन ।
त्यसैले मेरो लागि ब्लगिङ सजिलोसँग स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्न एउटा राम्रो माध्यम हो ।
ब्लगमा आचारसंहिता ?
ब्लगमा आचारसंहिताको बारेमा एक प्रकारको द्वन्द चलिरहेको छ ब्लगरहरुबिच पनि । आचारसंहिता चाहिदैन स्वन्त्रत रुपले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि एउटा समुह छ । आचारसंहिता र कानुन फरक कुरा हो भन्ने नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ । आचारसंहिता पालना गर्दा राम्रो , नगरे पनि केहि कारबाही हुँदैन भनेर बनाइएको हुन्छ ।
थोरै आत्मनियन्त्रण ब्लगिङमा पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म । जति नै स्वन्त्रताको कुरा गरे पनि आफुले गरेको कुराले समाजलाई असर गर्छ भने त्यसका केही सीमा हुन्छन् नै । जब तपाईं ठुलो समुहमा जानु हुन्छ भने आफुले लेखेको कुरा प्रति उत्तरदायित्व हुनैपर्छ । त्यसैले ब्लगिङ गर्दा आचारसंहिताको बारेमा म सकारात्मक नै छु ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव विस्तारै विस्तारै बढी रहेको छ, यो ट्रेन्डलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
प्रविधिलाई आत्मासात गर्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल त सुचनाको गोदाम नै हो । त्यसैले यसको पहुँच बढाउनु एकदमै जरुरी छ ।
तर यसको सकारात्मक वा नकारात्मक कुन रुपमा प्रयोग भईरहेको छ भन्ने बारेमा चाहीँ बहस गर्ने बेला भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
विशेष गरेर यतिबेला अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दै सामाजिक सञ्जालहरु मानिसलाई गालि गर्नको लागि मात्र प्रयोग भईरहेको छ । आशा गरौ विस्तारै विस्तारै यो क्रममा सुधार आउला ।
पहिले रेडियो , टेलिभिजन र पत्र-पत्रिकाबाट मात्र फिल्मको मार्केटिङ हुन्थ्यो । अहिले तपाईंले सोसिअल मिडियाको पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि ?
त्यो किन पनि हो भने अहिले फिल्म हेर्ने ठुलो जमात सोसिअल मिडियामा बढी सक्रीय छ । यो भन्दा पहिलाको फिल्म लुट सोसिअल मिडियाको कारणले नै बढी सफल भएको हो । तर मुलधार मिडियाको भूमिका पनि आफ्नो ठाँउमा छँदैछ ।
तपाईंले आफ्नो ब्लगबाट हाइवेको प्रमोसन गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप पनि छ नि । त्यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
मैले ब्लगिङबाट मार्केटिङ गरेको छैन । मैले अरु सोसिअल मिडियाको प्रयोग गरेको छु । तर मैले भर्खरै एउटा ब्लग पोस्ट गरेको छु सत्य स्वीकार गर्न किन गार्‍हो ? जसमा मैले हाइवेलाई प्रतिरक्षा गर्दै लेखेको छु । मैले आफ्नो फेसबुकमा नामको अगाडी हाइवे राखेको छु । दुइ - चार जनाले मलाई व्यक्तिगत रुपमा घोच-पेच गरेर लेखेपछी मेरो आवेगपुर्ण प्रतिकिया हो । मैले पहिलो पटक मेरो फिल्मको लागि ब्लग प्रयोग गरेको हुँ । त्यो भन्दा अगाडी मैले ब्लगबाट फिल्मको मार्केटिङ गरेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालको सही उपयोगका लागि के सुझाव दिनु हुन्छ ?
सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दा अहिले नेपालमा फेसबुकको नै सबैभन्दा बढी प्रयोग भईरहेको होला । प्रयोगकर्ताहरु बढ्नु राम्रै कुरा हो तर च्याट वा फोटो शेयर गर्न मात्र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुको औचित्य हुँदैन।
सामाजिक सञ्जालबाट त आफुसँग भएको सुचना अरुलाई दिन सकिन्छ र अरुसँग भएको सुचना आफुले लिन सकिन्छ । साथै आपत्तिजनक फोटोहरु जस्ताको तस्तै राख्ने क्रम पनि बढ्दो छ, जुन ठिक होईन । यस विषयमा सिक्नु र सिकाउनु जरुरी छ ।
यस्तो कुराहरु सिकाउन के गर्नु पर्ला ?
यो त सामाजिक सञ्जालका अभियन्ताहरुले गरे राम्रो हो । आफ्नो सम्पर्कमा भएका साथिहरुलाई आफैले सम्झाउन सकिन्छ र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता आफै जिम्मेवार भएदेखि सबै भन्दा बेस हुन्छ ।
सरकारले केही नियमहरु ल्याई दियो भने अझ सजिलो हुन्थ्यो होला है ?
अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा मलाई भने सकभर सरकारले नियम नबनाओस् भन्ने लाग्छ किनभने सरकारले नियम बनाउँदा फोटो शेयर मात्र गर्न नपाउने त पक्कै बनाउँदैन अरु पनि नियम बनाउछ । तसर्थ प्रयोगकर्ता आफै सचेत हुनु जरुरी हुन्छ ।
नयाँ ब्लगरहरुलाई के सुझाव दिन चाहानु हुन्छ ?
ब्लगिङ्ग गर्दा जे लेख्नु हुन्छ मनैदेखि र मन लागेको कुरा लेख्नुहोस । तर के कुरा याद राख्नुहोस भने ब्लगरहरुको भिडमा अलग पहिचान बनाउन तपाईको लेखको प्रस्तुति फरक हुनु पर्छ ।
मैले जे पनि लेख्न पाउँछु भन्ने सोच नराख्नुस किनभने तपाइले लेखेको कुरा जब सार्वजनिक गर्नु हुन्छ त्यो तपाईको मात्र विचार हुदैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ ।
नागरिक पत्रकारिताको प्रर्वधनको लागि मेरोरिपोर्टले गरिरहेको कार्यलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
मेरोरिपोर्टले नागरिकता पत्रकारिताको प्रर्वधनको लागि गरिरहेको कार्य एकदमै सकारात्मक छ । मेरोरिपोर्टले भाषाको विषयमा पनि एकरुपता ल्याउनसके अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
अनन्तको ब्लग: http://sanubhai.wordpress.com/
अनन्तको ट्वीटर ह्यान्डल : @AnantaBrt
शेखर ढकाल (यात्री शेखर)
Comment by Binaya Shekhar on July 24, 2012 at 6:45am
Badhai ho Bhai. Look forward to read more blog in day to come.
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on July 20, 2012 at 9:39am
Comment by Pagal Basti on July 19, 2012 at 8:22pm
@AnantaBrt बोलाइ बधाइ छ है
Comment by Umesh Sigdel on July 19, 2012 at 11:46am
बधाइ , बधाइ , अनी बधाइ । ट्रीटको अपेक्षा ।
Comment by MeroReport on July 19, 2012 at 10:20am
@Ananta Thank you for correcting us and apologies for the mistake. We have edited it.
Comment by Ananta Koirala on July 19, 2012 at 10:19am
वधाई दिई सक्नु भएका र दिन बाँकी रहनुभएका सबैलाई धन्यवाद :) तपाईंहरूको आशिर्वाद मलाई लागिरहोस् :)
Comment by Indra Dhoj Kshetri on July 19, 2012 at 10:14am
लौ धेरै धेरै बधाई छ अनन्तलाई । लेखाईको क्रम अझै बढ्दै जाओस् अझै धेरै पढ्न पाइयोस् ।
Comment by subas koirala on July 18, 2012 at 6:21pm
Congratulation !! Bro !!
Comment by सुजनचन्द्र पौडेल on July 18, 2012 at 6:19pm
बधाई छ अनन्तजी लाई :))
Comment by Kabita on July 18, 2012 at 5:41pm
ब्लगर अफ दि विक हुन भएकोमा धेरै धेरै बधाई अन्नत जीलाई
Comment by Amuna Chapagain on July 18, 2012 at 5:40pm
Comment by Ananta Koirala on July 18, 2012 at 5:35pm
धन्यवाद मेरो रिपोर्ट टीमलाई :)
एउटा सानो कुरामा स्पष्टीकरण लेख्दैछु। मैले फरकशैलीका चलचित्र अर्थात् सुत्रबद्ध (एउटा बलबान हिरो हुन्छ, सुन्दरी हिरोइन, अनि रावणजस्तो भिलेन, साथमा पाँचवटा गीत र पाँचवटा फाइट हुन्छन्) भन्दा फरक यथार्थसँग नजिक रहेर बनिएका चलचित्र भन्न खोजेको हो। त्यसैले सुत्रबद्ध चलचित्र मेरो रूचीका चलचित्र होइनन्, बरू सुत्रबद्धभन्दा फरक भन्न खोजिएको हो।
Comment by MeroReport on July 18, 2012 at 5:31pm